Pasta, ilay clipboard tena ilain'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Pasta, ilay clipboard tena ilain'ny macOS
Iray amin'ireo fiasa manintona indrindra amin'ny Windows 10 sy Windows 11, tsy fantatry ny mpampiasa maro izany, farafaharatsiny ho an'ireo rehetra izay tsy mila miasa tsy tapaka amin'ny clipboard. Samy Windows 10 sy Windows 11 mamela antsika tehirizo ao amin'ny solaitrabe ny atiny rehetra izay adikay ary miditra amin'izany isaky ny tiantsika.
Raha manontany tena ianao dia afaka miditra amin'izany isika amin'ny fanindriana ny fanalahidy Windows + v, fa tsy ny Control + v. Raha mitady clipboard ho an'ny macOS ianao izay mikarakara tantano ny atiny rehetra adikao ao fa tsy manorata azyTsy maintsy manandrana Pasta ianao, rindranasa ahafahantsika mitantana ny solaitrabe toy ny hoe notepad.
Pasta dia fampiharana ahafahantsika mitantana ny atiny rehetra izay adikay amin'ny takelaka miaraka amin'ny fetra 20 tapaka ho an'ny dikan-teny maimaim-poana. Raha mampiasa an'io fiasa io tsy tapaka ianao, fa tsy amin'ny fomba tena mitaky, dia mahafinaritra ny vahaolana omen'ny Pasta antsika.
Saingy, tsy vitan'ny hoe mamela antsika hitahiry ny votoaty rehetra voatahiry ao amin'ny takelaka izy io, fa mamela antsika koa mandamina ny clippings manerana ny fanangonana, dia ahitana rafitra fikarohana mahery vaika hahitana izay tadiavintsika amin'ny fotoana rehetra ary manana interface tsotra.
Ny interface amin'ny endrika grid, dia mamela antsika tadiavo haingana ny atiny nadikay vao haingana. Afaka manokatra ny rindranasa amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry isika, mifanaraka amin'ny maody maivana sy maizina an'ny macOS Mojave ...
Es Manohana ny fiasa Universal Clipboard, fiasa macOS izay ahafahantsika mametaka ny atiny nadika amin'ny fitaovana hafa mitovy ID Apple, manohana Touch Bar, maneho rohy, lahatsoratra, hetsika kalandrie amin'ny fomba hafa, manohana Quick View hijerena sary, rohy na lahatsoratra ...
paty dia mifanaraka amin'ny Apple tantanan'ny Apple M1 chip, mitaky macOS 10.12 na aoriana, azo alaina maimaim-poana miaraka amin'ny fetra 20 snippet. Raha te hanaisotra io fetra io ianao ary hamaha ny fiasa rehetra dia azonao atao ny mampiasa ny fividianana ao anatin'ny fampiharana izay mitentina 8,99 euros.
Mba ho fampiharana tonga lafatra, dia tokony hamela ny fampitahana votoaty amin'ny fitaovana hafa amin'ny iCloud ary manolotra fampiharana ho an'ny iOS. Na izany aza, ho an'ireo mpampiasa izay te-hitantana fotsiny ny atiny alainy amin'ny Mac-ny dia tonga lafatra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Pasta, ilay clipboard tena ilain'ny macOS
Tsara kokoa ny PastePal. Talohan'ny nampiasako Pasta fa tsy misy loko raha oharina amin'ny PastePal.
Sokafy ny rakitra rehetra miaraka amin'ny Unarchiver One
Hevitra fanomezana Krismasy ho an'ireo tia Apple